विवाह भएको २३ दिनमै नव दुलहीको मृत्यु
May 16, 2021 N88LeaveaComment on विवाह भएको २३ दिनमै नव दुलहीको मृत्यु
पाल्पा । पाल्पामा एक नव बिवाहित दुलहीको विवाह भएको २३ दिनमै मृत्यु भएको छ । उनले झुण्डिएर देहत्याग गरेकी हुन् । नव विवाहित दुलहीको तानसेन नगरपालिका वडा नं १२ अवलमा घरमै भुण्डीएको अवस्थामा शव फेला परेको हो । अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका वडा नं ३ आमबोटकी वर्ष २२ कि रुपा पराजुलीको यही वैशाख ११ गते पाल्पा […]
May 16, 2021 N88LeaveaComment on पेट्रोल र डिजलको मूल्य बढ्यो
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजल, मट्टितेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर २/२ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गरेको छ । निगमका अनुसार आइतबार राति १२ बजेपछि काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलको मूल्य १२३ र डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १०६ र आन्तरिक हवाइ इन्धनको आन्तरिक उडानाके मूल्य प्रतिलिटर ७८ कायम भएको छ । आयल निगमले एलपी ग्यास र अन्तर्राष्ट्रिय […]
May 16, 2021 N88LeaveaComment on चौधरी फाउन्डेसनले वीरमा आईसीयू वार्डसहित धनगढी र सुर्खेतमा अक्सिजन प्लान्ट बनाउने
काठमाडाैं । कोभिड–१९ को दोस्रो लहरका कारण नेपालमा उत्पन्न स्वास्थ्य संकटको समयलाई मध्यनजर गर्दै चौधरी फाउन्डेसनले वीर अस्पतालमा १८ शैयाको आईसीयू वार्ड र अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने भएको छ । फाउन्डेसनले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा दीर्घकालीन महत्व राख्ने केही परियोजनाहरूमा काम गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । र यी निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने अन्तिम तयारीमा रहेको पनि […]
May 16, 2021 N88LeaveaComment on जाने भयो ओलीले नियुक्ति गरेका पूर्वमाओवादी मन्त्रीको पद
काठमाडौं । संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार पुनस् प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका नेकपा ९एमाले० का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। सँगै पुरानै मन्त्रीहरुलाई निरन्तरता दिएका छन् । राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएका ओलीले पुरानै क्याविनेटमा रहेका सबै मन्त्रीहरुलाई सँगै शपथ खुवाएका छन् । शपथ खानेमा नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरी एमाले प्रवेश गर्दा […]
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सामान्यतया आफुलाई अरुको तुलनामा अलि वढिने जान्ने वुझ्ने सम्झन्छन्। उनको वोली र ब्यवहारले कुनै पनि विषयमा उनी वाहेक अर्को जानकार होला भन्ने भान हुँदैन। विज्ञता प्रश्तुत गर्ने क्रममा उनले गत वर्षको संसद्को एक बैठकमा नेपालीलाई कोरोनाले केहि नविगार्ने भन्दै अभिब्यक्ति दिए । आफै ‘कोरोना विज्ञ’ झै गरेर ‘नेपालीको इम्युनिटी […]
May 16, 2021 May 16, 2021 N88LeaveaComment on ६० वर्षीय लक्षिबहादुर मगर काठमाडाैंबाट दुई हप्तादेखि बेपत्ता, खाेजी गरिदिन आग्रह
काठमाण्डौ । धनकुटा घर भइ काठमाण्डाै महानगरपालिका १० कपन बस्दै आएका ६० वर्षीय लक्षिबहादुर पिठाकोटे मगर दुई हप्तादेखि हराइरहनुभएको छ । गएको वैशाख १७ गते कपनको आकाशेधाराबाट हराइरहेको र अहिलेसम्म सम्पर्कमा नआएको उहाँको छोरा तेजबहादुर पिठाकोटे मगरले बताउनुभएको छ । लक्षिबहादुरले खैरो रङ्गको ट्र्याक र सेतोमा कालो धर्के टिसर्ट लगाएको र मानसिक अवस्था ठिक नभएको […]
बल्ल बल्ल पार्टी बिवाद मिलाउन लागेकै बेला थपियाे ओलीलाई अर्काे टेन्सन, सर्वाेच्चमा पर्‍यो रिट
May 16, 2021 N88LeaveaComment on बल्ल बल्ल पार्टी बिवाद मिलाउन लागेकै बेला थपियाे ओलीलाई अर्काे टेन्सन, सर्वाेच्चमा पर्‍यो रिट
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पुनः शपथ गराउन माग गरिएको रिट सर्वोच्चमा पुगेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले वैशाख ३१ मा प्रधानमन्त्रीले लिएको शपथ त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै रिट हालेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले शपथ लिँदा राष्ट्रपतिले उच्चारण गर्न आग्रह गरेको ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्द ‘त्यो पर्दैन’ भनेर […]
आज थपिएका संक्रमित भन्दा निकाे हुने धेरै
May 16, 2021 N88LeaveaComment on आज थपिएका संक्रमित भन्दा निकाे हुने धेरै
काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ६ हजार ६४८ जना कोरोनामुक्त भएका छन् । योसहित निको हुनेको संख्या ३ लाख ३९ हजार ७५६ जना पुगेको छ । गत २४ घण्टामा थप ७ हजार ३६८ जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा. डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार पीसीआर विधिबाट […]
अन्ततः एमालेबाट बादल आउट
May 16, 2021 N88LeaveaComment on अन्ततः एमालेबाट बादल आउट
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमालेको विवाद मिलाउन बादललाई बाहिर राखेर बार्ता टोली गठन भएको छ । शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष के पी ओलीले पूर्वमाओवादी रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई राखेपछि माधव कुमार नेपालले आपत्ति जनाएका थिए । त्यसकै कारण शुक्रबार कार्यदल बन्न सकेको थिएन । आइतबार भने नेपाल पक्षको चाहना अनुसार नै पार्टी भित्रको […]
एमालेमा बिवाद मिलाउन बन्यो कार्यदल, को–को छन् सदस्य ?
May 16, 2021 N88LeaveaComment on एमालेमा बिवाद मिलाउन बन्यो कार्यदल, को–को छन् सदस्य ?
काठमाडौं । नेकपा एमालेको जारी विवाद निरुपणका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ । आज आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भएको ओली–नेपालबीचको छलफलले संस्थापन र असन्तुष्ट पक्षका पाँच/पाँच जना नेता रहेको कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदलमा माधव पक्षबाट भीम रावलको नेतृत्वमा घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त र गोकर्ण विष्ट छन् । त्यस्तै ओली पक्षबाट सुवास […]